Tips Fa mpitety Eoropa irery By Train | Save A Train
Home > Travel Europe > Tips Fa mpitety Eoropa irery By Train
(Last Nohavaozina: 06/10/2020)
Nandeha lamasinina Eoropa dia iray amin'ireo tsara indrindra, scenic and cultural journeys in the world. Na mitady mivantana eo amin'ny fiaran-dalamby tanàna eoropeanina lehibe toy ny vaovao London ho any Amsterdam nampiofana na mitady tantaram-pitiavana nandehanany fiaran-dalamby, Eoropa lamasinina Travel manana rehetra.
Ny isan'ny olona interrailing amin'ny alalan'ny Eoropa isan-taona dia 400,000 olona. Azonao atao ny mitsidika ny 30 countries using interrailing tickets. Koa satria nanomboka tamin'ny interrailing 1972, Olona an-tapitrisany no nandeha namaky Eoropa mampiasa io lalamby tokana tapakila.
Traveling manerana an'i Eoropa tamin'ny tapakila iray avy sy ny mpomba sy mpanohitra. Misy toerana maro amin'ny aterineto natokana ho toro-hevitra ho an'ny mpandeha izay te-hahita Eoropa lamasinina. Toerana ireo dia ahitana lalana Planner fampiharana ary ny tranonkala / bilaogy izay manolotra toro-hevitra anareo amin'ny ny fomba teti-bola.
Ity lahatsoratra ity dia nosoratana mba hampianatra momba Train Travel ary Izy no nanaovana Save A Train, Train mora indrindra tapakila Website In The World.
Nandeha Europe irery
Mandeha amin'ny alalan'ny Eoropa irery manana be dia be ny soa. Rehefa amin'ny tenanao ianao, Manana fanaraha-maso tanteraka ny dia.
Ny hoe irery dia manome ianao, dia afaka hanapa-kevitra ny amin'ny faritany haleha izy, mihinana izay sakafo tianao ary rehefa maniry ianao ary aza avela hifamaly amin'ny olon-kafa amin'ny dianao,
Toy izany fahalalahana Mety hitarika ho amin'ny tena-baovao bebe kokoa, ary ny fahafahana hihaona olona vaovao sy ny hafa mpifindrafindra monina, raha mitoetra reinventing ny tenanao. izany Solo traikefa Mety hitarika ho amin'ny tena fitomboana.
Dortmund ho Hanover Lamasinina
Essen ho Hanover Lamasinina
Bonn ho Hanover Lamasinina
Luxembourg ho Hanover Lamasinina
manana namana taminareo, fony ianao mandeha, manome anao ny olona iray hizara ny fahatsiarovana amin'ny, Inona no ampahany be nandeha ny alalan 'Eoropa.
Rehefa manao dia lavitra amin'ny alalan'ny Eoropa irery miezaka ny hijanona ao amin'ny tranom-bahiny.
Hostels dia feno olona izay mandeha irery amin'ny alalan'ny Eoropa, Noho izany hifanerasera ary nihaona tamin'ny olona.
Miezaha ho toy ny namana ary sariaka araka izay azonao atao rehefa mandeha irery sy Raha toa ianao ka misy olona saro-kenatra, dia mila ny hametraka eo amin'ny ezaka fanampiny mba ho sariaka ny mpandeha hafa. Tsy afaka andro vitsivitsy hatao ho zatra bebe kokoa misokatra sy ny namana, fa dia ho very maina ny fotoana rehefa manomboka hanana fifandraisana amin'ny namana niaraka nanao.
Misy ihany koa ny nanolorana azy ho mahandro sakafo ao amin'ny akanin'ny tanora, izay hanome fahafahana bebe kokoa hiresaka amin'ny hafa.
Raha toa ianao ka liana kokoa amin'ny fivoriana an-toerana noho ny mpandeha hafa, Couchsurfing dia mety ho tsara ho anao safidy.
Couchsurfing, izay ahitana ny azy fihaonana in trano fisotroana sy ny Pubs no mampifandray anao amin'ny kolontsaina eo an-toerana ary ihany koa ny fahafahana hihaona ireo mpiasa vahiny.
Misy ny sasany tanàna eoropeanina izay misy be dia be ny pickpockets sy ny karazana olon-dratsy mety ho mitady haka tombony ny mpizahatany, Ampiasao anao manokana ary koa ny fahaiza-mamaky Travel sehatra fiadian-kevitra na fanazavana manan-danja hafa hahita ny toerana sy ny olona mba tsy.
Mba hahita ny tsara indrindra vidin-javatra mba handeha amin'ny alalan'ny Eoropa fidirana ho an'ny tranonkala ankehitriny. Raiso 3 minitra vao vita ny lamasinina tapakila famandrihana.
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, dia tsindrio eto: ny https://embed.ly/code?url = ny https://www.saveatrain.com/blog/tips-for-traveling-europe-alone-by-train/ - (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)
Raha te-ho tsara fanahy ny mpampiasa, dia afaka hitarika azy ireo mivantana an-pikarohana pejy. Eo ity rohy ity, dia hahita ny làlana malaza indrindra fiaran-dalamby – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside manana ny rohy ho an'ny teny Anglisy fipetrahana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/in_routes_sitemap.xml, ary afaka hanova ny / ao amin'ny / en na / fiteny azy sy ny maro hafa.